IGAD oo ka hadashay Rabshadihii Muqdisho baaqna soo saartay | Banaadir Times
HomeUncategorisedIGAD oo ka hadashay Rabshadihii Muqdisho baaqna soo saartay
IGAD oo ka hadashay Rabshadihii Muqdisho baaqna soo saartay
Urur goboleedka IGAD ayaa soo dhaweeyay baaqyadii kasoo baxay Madaxda dalka iyo qaar ka mid ah maamulada ee la xariira Arrimaha Doorashooyinka laguna qaboojiyay xiisadii kajirtay Magaalada Muqdisho.
Qoraal kasoo baxay Urur Goboleedka IGAD ayaa waxaa lagu sheegay in IGAD ay dooneyso in la galo wadahadal wax dhisaya oo loo wada dhan yahay shuruudaha lagama maarmaanka u ah dejinta dhammaystiran ee dhammaan arrimaha taagan.
” IGAD waxay ugu baaqeysaa dhammaan daneeyayaasha inay si dhaqso leh ugu dhaqaaqaan gabagabada qaab dhismeedka heshiiskii “Sebtember 17″ lana galo wadahadal loo dhan yahay oo hufan oo mudnaanta siiya himilada caanka ah ee Dadka Soomaaliyeed si nabad ah, loo wada dhan yahay oo la isku halleyn karo lagu kalsoonaan karo iyadoo aan waqtiga la dheereeneyn ayaa lagu yiri” Qoraalka IGAD.
Sidoo kale IGAD ayaa ku boorisay dhamaan hogaamiyaasha Soomaalida inay is xakameeyaan oo ka fogaadaan ficil kasta oo horseedi kara rabshado rabshadaha. Dhammaan dhinacyadunq ay hubiyaan ilaalinta nafta, hantida iyo hay’adaha rayidka ah.
Ugu dambeyn Urur Goboleedka IGAD ayaa ka codsaday Beesha Caalamka in lala soo gaaro gargaar Bani’aadanimo dadka barakacayaasha ah kadib rabshadihii ugu dambeeyay ee ka dhacay Muqdisho, isla markaana dhankooda ay sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan dadka Soomaaliyeed ee raadinaya, Nabadda, dimuqraadiyadda iyo xasilloonida.
Previous articleBooliska Somaliland oo xir xiray musharixiin kuwo kalena baadi goobaya
Next articleMareykanka oo Farmaajo & Golaha Shacabka ka dalbaday inay baabi’iyaan muddo kororsiga